उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रश्न- वैशाख १५ पछि लकडाउन खुल्छ? -
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रश्न- वैशाख १५ पछि लकडाउन खुल्छ?
April 20, 2020 April 23, 2020 - by admin - LeaveaComment
कोरोनाभाइरसको माहामारीले विश्वभरि फैलिरहेको छ। नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समन्वय समिति गरेको छ। सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्दै सतर्कता अपनाएको छ। तर लकडाउन भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा लकडाउन कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्नेदेखि यसको व्यवस्थापनका थुप्रै पाटामा प्रश्न उठेका छन्। सरकारले यी विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ? के गरिरहेको छ? सेतोपाटीका मनोज सत्यालले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादीत अंश:
यो अन्तरवार्ताका मुख्य बुँदा:भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण रहुन्जेल नेपाल-भारत सीमा खुल्ने छैन।१५ गते पछि लकडाउन के हुन्छ भन्ने विषय कुनै राजनीतिक विश्लेषण गरेर दिने फैसला र निर्णय होइन।’यतिबेला बोर्डरमा बसेका छौं, मातृभूमि जान पाउँ’ भन्ने खालका कुरा समाधान होइनन्। भावनात्मक कुरा गरेर हामी मुख्य कामबाट विचलित हुनुहुन्न
भारतमा नेपाली छन्, खाडीमा छन्। त्यहाँमात्र किन सम्झनुहुन्छ। तपाईं एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउनुहुन्न। एउटा वडाबाट अर्को वडा जान पाउनुहुन्न। घुमफिर गर्न पाउनुहुन्न। अहिलेको परिस्थितिमा त्यही नै सही हो।यहाँ त देश रूँदैछ। मानवजाती रूँदैछ। हिँड्न नपाएर को मान्छे कहाँ, रूँदैछ भन्ने कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ।स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद कानुनी ढंगले अगाडि बढ्यो। हाम्रोमा ‘सबै अनियमितता भयो’ भन्ने ढंगले हेर्ने रोग छ। त्यो रोगप्रति दु:ख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यो कर्ममा कथा कथ्नेलाई प्रत्येकलाई चुनौती दिन चाहन्छौं।सेना सरकारको अंग हो। सरकारले चाहेको बेला के काममा प्रयोग गर्ने हो गराउन, सक्छ।
Previous Article आज यूरो, पाउण्ड र बहराइन दिनारको दर बढ्यो, अन्य देशको कस्तो ?
Next Article प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने कानुनमा संशोधन चाहनुको अर्थ